#IBC2018: Dell EMC manolotra ny fitoviana manerana ny birao - NAB Show News amin'ny Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » Featured » #IBC2018: Dell EMC dia manome vahana manerana ny Birao
#IBC2018: Dell EMC dia manome vahana manerana ny Birao
Dell EMC Dia hivoaka ao amin'ny trano #7.C39 ao amin'ny IBC Show 2018 ao RAI Amsterdam, amin'ny 13th-18th 2018th, XNUMX. Izy ireo dia hampiseho ny farany amin'ireo fanomezana teknolojia fitehirizana izay manasongadina ireo fampielezam-peo avo indrindra, ireo fikambanana ara-panatanjahantena, ary ireo tranokala famokarana. Amin'ny fanombohan'ny fampiroboroboana ny "Virtual Reality" izay manana mpanjifa maherin'ny ankamaroan'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny teknolojia mitondra fiara izay manohana ny fampiharana indostrialy malalaka. Dell EMC dia nametraka ny tenany tamin'ny fanohanany ny mpanjifa, ny mpiara-miasa, ary ny vokatra vokatra ao amin'ny sehatra media sy fialamboly.
Dell EMC Ny servera dia naorina noho ny asa sarotra be loatra. Ny PowerEdge MX dia mirakitra asa be karama sy ho avy. Ity fotodrafitrasa mahomby ity dia mamela ny fampiharana rindrambaiko ho an'ny rindrambaiko noforonina, noforonina tsy misy fiaramanidina midadasika, ary manome fanohanana ny teknolojian'ny famoahana teknolojia maro samihafa, ireo karazana tahirin-tsarimihetsika vaovao ary ny fanavaozana vaovao vaovao-tsara amin'ny ho avy. Fanomezana fanohanana ara-pirahalahiana amin'ny fametrahana virtoaly manify, fandraketana rindrambaiko, tambajotra voafaritry ny rindrankajy, ny fahagagana ary ny tetikasa lehibe. Fanohanana ny fihenan'ny NVMe farany ambany sy ny fifandraisana 25GbE an'ny XNUMXGbE, ity vokatra ity dia "mitabataba" ny fahombiazan'ny vokatra.
"Raha toa ny teknolojia misokatra, toy ny kanji-pahaizana manokana, IoT sy ny fametrahana fandraketan-tserasera sy ny tambajotra, dia manolotra tombontsoa amin'ny fifaninanana, ny asa sarotra dia mety ho sarotra ny haminavina sy hametrahana fanamby vaovao ho an'ny departemanta ao amin'ny IT," hoy i Ashley Gorakhpurwalla, filoha sady mpitantana foibe, Dell EMC Server sy rafitra rafitra. "PowerEdge MX dia mamela modely ho an'ny famolavolana sy hampifandimbiasana ny compute, ny fitehirizana ary ny tambajotra, ka ny orinasa dia afaka manova ny IT amin'ny fomba izay manatsara ny loharanon-karena ary manolotra fiarovana amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fandrosoana teknolojia ho avy."
Ny PowerEdge MX dia manome fahafaha-manatsara ny fampifanarahana ary manolotra portfolio-n'ireo fitaovana toy ny:
Dell EMC PowerEdge MX7000 chassis - Manolotra fototra matotra azo antoka amin'ny fanohanana ireo taranaka maro mpandrindra mpamorona, ao anatin'ny rafitra manjavozavo amin'ny fitantanana ny fiainana andavan'andro sy ny endri-tsoratra tokana ho an'ny singa rehetra, ahafahan'ny fikambanana mifantoka bebe kokoa amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny raharaham-barotra noho ny fisorohana ny IT. Ity efi-trano 7U ity dia misy biriky valo ahafahana manamboatra karazana solosaina isan-karazany sy tsanganana roa.
Dell EMC PowerEdge MX740c sy MX840c tsinjara - Taridalana roa sy efatra-socket dia manome fanazavana feno, tsy misy antontan'isa maromaro, miaraka amin'ny fampisehoana miavaka sy karazana fitahirizana tahirin-tsakafo toy ny NVMe. Ny MX740c tokana tokana sy MX840c avo roa heny dia manohana ny feno Intel® Xeon Processor Scalable Processor miaraka amin'ny teboka enina fahatsiarovana. Ny MX740c no sehatra iray ihany, sehatra roa, solo-pahefana maoderina izay afaka manangona sy mamorona hatramin'ny enina 2.5 "NVMe, SAS na SATA". Ny MX840c dia afaka mihazona adiny valo sy andaniny.
Dell EMC PowerEdge MX5016 - Manangona ny servisy MX, izay mihazona ho an'ny 16 mofomamy maraikitra amin'ny rindran-damba SAS, miaraka amina milina MX5016s fito ao amin'ny chassis MX ho an'ny 112 hafainganam-pandehan'ny rakitra mivantana, . Ireo rindran-damina ireo dia mety ho ny sariohatra amin'ny servisy iray na maromaro, manolotra ny tahan'ny tahiry tsara indrindra ilaina ho an'ny fampiasana manokana.
Dell EMC PowerEdge MX Ethernet sy Fiber Channel modules - Ireo faratampony vaovao marefo, ny famolavolana mivezivezy manerantany ho an'ny sehatr'asa maromaro amin'ny chassis dia ahitana fomba haingana ho an'ny fanarahan-drafitra, ny kalitaon'ny serivisy sy ny fanasitranana mahazatra ho an'ny fahombiazan'ny tambajotram-peo amin'ny PowerEdge MX tokana mpitantana. PowerEdge MX no fotodrafitrasa voalohany ampiasaina amin'ny sehatry ny indostria mba hanolorana ny fifandraisana mivantana amin'ny 25Gpbs Ethernet (GbE) sy ny 32Gbps Fiber Channel. Raha mifandray amin'ny 100GbE sy 32G Fiber Channel, ny mpanjifa dia afaka manantena fa ho an'ny 55% ny famerenana ny fikajiana ho an'ny haitaille-be, skalable, multi-chassis architectures.
The Dell EMC Ny PowerEdge MX dia mahazo manomboka manomboka ny Septambra 11th, 2018, ary hanokatra lamin'asa amin'ny #IBC2018 fivoriambe. Aza adino ny fahafahana mandre ny hery mahagaga izay Dell EMC Ny fianakaviana dia afaka manome ny asanao. Booth #7.C39 ao amin'ny IBC Show 2018 ao RAI Amsterdam.
Dell EMC, ampahany amin'ny Dell Technologies, dia manome fahafahana ireo orinasa hanavao sy hanamboatra ary hanova ny foiben'izy ireo amin'ny fampiasana ny rafitra fitantanana, ny server, ny tahiry ary ny teknolojia fiarovana. Izany dia manome fototra azo itokisana ho an'ny orinasa hanova ny IT, amin'ny famoronana rahona marika, ary hanova ny raharaham-barotra amin'ny alalan'ny famoronana fampiharana cloud sy natokana ho an'ny vahaolana. Dell EMC mpanjifa mpanjifa manerana ny firenena 180 - anisan'izany ny 99 isan-jaton'ny Fortune 500 - miaraka amin'ny portfolio-manerantany indrindra amin'ny sehatry ny indostria sy ny zava-baovao avy any amin'ny sisona mankany amin'ny rahona.
Spears & Arrows virtoaly zava-misy	2018-09-07
Next: Quantum dia mamokatra Solutions StorNext Archive Solutions ho an'ny Avid MediaCentral Environment
Hey Buddy !, nahita ity fampahalalana ity ho anao aho: "#IBC2018: Dell EMC dia manome vahaolana amin'ny fitantanana". Ity ny tranonkala: https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dell-emc-offers-flexibility-across-the-board/. Misaotra anao.